သမ္မတရှီကျင့်ဖိန်က တရုတ်နိုင်ငံက အာရှ-ပစိဖိတ်ဒေသအတွက် ကြီးမားသောအခွင့်အလမ်းများ ဖန်တီးပေးသွားမည်ဟု ပြောကြား - Xinhua News Agency
သမ္မတရှီကျင့်ဖိန်က တရုတ်နိုင်ငံက အာရှ-ပစိဖိတ်ဒေသအတွက် ကြီးမားသောအခွင့်အလမ်းများ ဖန်တီးပေးသွားမည်ဟု ပြောကြား
ပေကျင်း ၊ နိုဝင်ဘာ ၁၁ ရက်(ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ သမ္မတ ရှီကျင့်ဖိန်က တရုတ်နိုင်ငံသည် ခေတ်မီဆိုရှယ်လစ်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအဖြစ် ကိုယ်တိုင် အပြည့်အဝတည်ဆောက်နိုင်ရေး ခရီးသစ်တစ်ခုအား စတင်ခဲ့ပြီ ဖြစ်ကြောင်း နှင့် ယင်းမှာ အာရှ-ပစိဖိတ်ဒေသအတွက် ကြီးမားသောအခွင့်အလမ်းများ ဖန်တီးပေးသွားမည်ကြောင်း ယနေ့ နိုဝင်ဘာ ၁၁ ရက်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။ရှီက ယင်းမှတ်ချက်အား အာရှ-ပစိဖိတ် စီးပွါးရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ခေါင်းဆောင်များ ထိပ်သီးအစည်းအဝေးသို့ ရုပ်သံမှတစ်ဆင့် တက်ရောက်မိန့်ခွန်းပြောကြားစဉ် ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
တရုတ်နိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသည် ပြီးခဲ့သည့်နှစ်များအတွင်း အာရှ-ပစိဖိတ် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်၏ အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခု ဖြစ်ကြောင်း ၊ တရုတ်နိုင်ငံသည် သတ်မှတ်ထားသည့် အချိန်ဘောင်အတွင်း အသင့်အတင့် ကြွယ်ဝချမ်းသာသော လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအား အပြည့်အဝတည်ဆောက်ရေးပန်းတိုင်ကို ရရှိခဲ့ကြောင်း ၊ အလုံးစုံဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု ပပျောက်ရေးတွင် သမိုင်းဝင်အောင်မြင်မှုတစ်ခု ရယူနိုင်ခဲ့ကြောင်း နှင့် ခေတ်မီဆိုရှယ်လစ်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအဖြစ် အပြည့်အဝတည်ဆောက်နိုင်ရေး ခရီးသစ်တစ်ခုအား စတင်ခဲ့ပြီ ဖြစ်ကြောင်း သမ္မတရှီက မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။“ဒါက ကျွန်တော်တို့ ဒေသအတွက် ကြီးမားတဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကို ဖန်တီးပေးသွားပါမယ်”ဟု ရှီက ပြောကြားခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံသည် ဒေသတွင်း စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် တွန်းအားထည့်သည်နှင့်အမျှ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး နှင့် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုတို့အား မြှင့်တင်ခြင်း ၊ မျက်နှာစာအားလုံးတွင် အစိမ်းရောင်အသွင်ကူးပြောင်းရေးကို ရှေ့ရှုရေး ၊ အာရှ-ပစိဖိတ် နှင့် အခြားတစ်ဘက်တွင် ဂေဟစနစ်ထိန်းသိမ်းမှုကို မြှင့်တင်ရန် ထောက်ပံ့မှုပေးအပ်ခြင်းများ ပြုလုပ်ရေးတို့တွင် ခိုင်မာစွာ ဆက်လက်ရှိနေမည် ဖြစ်ကြောင်း ရှီက ပြောကြားခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံအနေဖြင့် win-win ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို မြှင့်တင်သွားရေး နှင့် ဒေသစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အထောက်အကူပြုရေးတို့ကို ကတိပြုထားကြောင်းလည်း ၎င်းက ဖြည့်စွက်ပြောကြားခဲ့သည်။ (Xinhua)
#China #XiJinping #APEC #speech #တရုတ်နိုင်ငံ #ရှီကျင့်ဖိန် #မိန့်ခွန်း #ဆင်ဟွာ #xinhua #myanmar #xinhuamyanmar
China will create greater opportunities for Asia-Pacific region: Xi
BEIJING, Nov. 11 (Xinhua) — Chinese President Xi Jinping said on Thursday that China has embarked onanew journey toward fully building itself intoamodern socialist country, and this will create greater opportunities for the Asia-Pacific region.
Xi noted that China’s economic development has been an integral part of the Asia-Pacific cooperation process over the years. China has attained the goal of fully buildingamoderately prosperous society within the set time frame, securedahistoric success in eradicating absolute poverty, and embarked onanew journey toward fully building itself intoamodern socialist country.
“This will create greater opportunities for our region,” Xi said.
China will remain firm in advancing reform and opening-up so as to add impetus to economic development in the region, and advance green transition on all fronts and make its due contribution to boosting ecological conservation in the Asia-Pacific and beyond, Xi said.
The country will also stay committed to promoting win-win cooperation and contribute to the economic development of the region, he added. ■
Photo – Chinese President Xi Jinping deliversakeynote speech at the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) CEO Summit via video, in Beijing, capital of China, Nov. 11, 2021. (Xinhua/Li Xueren)